2019-09-04 14:09:23 , စာရင်းအင်းနယ်ပယ်မှ ၀န်ထမ်းများ…
စာရင်းအင်းနယ်ပယ်မှ ၀န်ထမ်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ Decision Maker များအတွက် “Essential Finance for Your Business” တစ်ပါတ်သင်တန်း
? လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ချမှတ်နိုင်ရန် မိမိလုပ်ငန်းရဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိထားဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။
? စာရင်းအယူအဆများ အရှုံးအမြတ်နှင့် လက်ကျန်ရှင်းတမ်းများ၊ ၀င်ငွေထွက်ငွေအခြေအနေများ၊ လုပ်ငန်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ၊ ဘဏ္ဍာရေးစာရင်းရှင်းတမ်းများကို စီစစ်သုံးသပ်တတ်ခြင်းဖြင့် သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပိုမိုမှန်ကန်တိကျစေမှာဖြစ်ပြီး ထပ်မံတိုးချဲ့မည့် လုပ်ငန်းတွေအတွက်လည်း စာရင်းအင်း အချက်အလက်တွေတွေက အလွန်အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေ သင့်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အထောက်အကူပြုမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
? ဒီအတွက် သင်ဟာ စာရင်းအင်းပညာကို မဖြစ်မနေတတ်မြောက်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
? လုပ်ငန်းအများစုဟာ အစပိုင်းမှာ ရောင်းအားနည်းလို့ အရှုံးပေါ်တတ်ပါတယ် .. ။
ဒါဟာ သဘာဝပါ .. ။ ဒါပေမယ့် ငွေကြေးကို စီမံခန့်ခွဲမှုမတတ်တဲ့အခါ မိမိရဲ့ထုတ်ကုန်ကို ရောင်းနေရသည့်တိုင် အရှုံးပေါ်တတ်ပါတယ်။ အတော်များများလည်း ကြုံဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ ရောင်းအားတွေ တက်လာသည့်တိုင် ထင်သလောက် အမြတ်က မတက်လာတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
? နောက်တစ်ခုက စနစ်ကျကျနဲ့ စီးပွားရေး လုပ်တဲ့အခါ စာရင်းမှတ်နည်းတွေက မိရိုးဖလာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ စာရင်းကိုင်တွေ ငှားပြီး လုပ်ငန်းကို လည်ပတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြဿနာက စာရင်းကိုင် (Accountant) ဆွဲပေး ရေးပေးထားတဲ့ ငွေစာရင်းမှတ်တမ်းတွေကို နားမလည်တာပါ။
? ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခု ရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာ သတင်းပို့ချက်တွေ တထပ်လိုက်ကြီး ကိုယ့်လက်ထဲ ရောက်လာတဲ့အချိန် ဘယ်က စလှန်ပြီး ကြည့်ရမလဲ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ..?
တကယ်တမ်း ငွေစာရင်းတွေမှာပါတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတွေဟာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအခြေနေကို ပြောပြနေတာပါ။ ကိုယ်က ဒီဘာသာစကားကို နားမလည်တာဟာ ပြဿနာတစ်ခုပါပဲနော်။
? နောက်ပြီး အရည်ချင်းရှိတဲ့ CEO တစ်ယောက်အတွက် decision science ဟာ အသက်ပါပဲ။ CEO ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းဟာ Emotion နဲ့ မသွားပါဘူး၊ Quantitative analysis နဲ့ သွားပါတယ်။
? Financial report တွေကို သေချာ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ စိစစ်ပြီးမှ အဖြရှာတာ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချတာတွေ လုပ်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ လုပ်ငန်းဟာ အောင်မြင်တာပါ။ ကိုယ်တွေဆီက လုပ်ငန်းရှင်တွေလဲ လုပ်ငန်း တစ်ခု အောင်မြင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် မှန်ကန်စွာချနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်မျိုကို မှန်ကန်အောင် ချမှတ်မလဲဆိုတာကတော့ သင့်ရွေးချယ်မှုအပေါ် မူတည်နေပါပြီ။
? အပေါ်က ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာလေးတွေ ပြေလည်ဖို့ အတွက် White Richmond Business School မှာ တစ်ရက်ကို ၂ နာရီ နှုန်းနဲ့ ၇ ရက်သာ အချိန်ပေးလိုက်ပါ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု့ အတတ်ပညာကို လက်တွေ့အသုံးချတတ်စေဖို့ သင်ကြားပေးပါ့မယ်။
နယ်ပယ် အသီးသီးမှ Manager များ၊
Decision Maker များ၊
လုပ်ငန်း စတင်တည်ထောင်သူ ပိုင်ရှင်ဒါရိုက်တာများ၊
မိသားစုလုပ်ငန်းမှ အလတ်စား၊ အကြီးစား လုပ်ငန်း သို့ ချဲ့ထွင်ပြောင်းလဲရန် ပြင်ဆင်နေသူများ
? သင်ကြားမည့်ဆရာ ?
Credit Holder (DHBW, Germany)
သင်တန်းကာလ – (၂၉.၀၉.၂၀၁၉ – ၀၅.၁၀.၂၀၁၉)
သင်တန်းအချိန် – နေ့စဉ် ညနေ ၆ နာရီမှ ၈ နာရီထိ (တစ်ရက် ၂ နာရီ)
သင်တန်းကြေး – ၅၀,၀၀၀ ကျပ်
?‍♂️?‍♀️ သင်တန်းသားများ စိတ်အေးချမ်းသာစွာ စိတ်ဝင်တစားသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် Aircon ခန်းထဲတွင် တစ်ဦးချင်း ဂရုတစိုက် သင်ကြားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
?? ပါဝင်မည့်ဝန်ဆောင်မှုများ ??
✨? Free WiFi
☕? ကော်ဖီ၊ အအေး
?? Textbook၊ စာအုပ်၊ ဘောပင်၊ အကျီင်္ များအပြင်
?? တစ်ဦးချင်းအလိုက် ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်ရေးရာများကို စိတ်တိုင်းကျ တိုင်ပင်နိုင်ခြင်း
???? သင်တန်းတက်ရောက်သူများကို အလုပ်အကိုင် (အခမဲ့) ရှာဖွေပေးခြင်း စသည့် ဝန်ဆောင်မှုများလည်း ရှိပါတယ်။
? အခြားသော စီးပွား​ရေးဆိုင်​ရာ UK Diploma ဘွဲ့အတန်းများလည်း မကြာခဏ တန်းခွဲသစ်များ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးလျှက်ရှိပါတယ်။
? ဗဟုတုသရစရာများ၊ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေး Motivation များ၊ အခက်အခဲဖြေရှင်းနည်းများကိုလည်း Page တွင် နေ့စဉ်မပြတ် တင်ပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် White Richmond Business School ရဲ့ အောက်ပါ Facebook Page လေးကို like လုပ်ထားပြီး လေ့လာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
? ကျောင်းလိပ်စာ ?
ဓ ၃/၂၈ ၊ နဝရတ်လမ်းသွယ်၊
၄၀ x ၄၁ ကြား၊ ၆၅ x ၆၆ ကြား၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။
Phone : 09-400400352
Email : whiterichmond.businessschool@gamil.com
Facebook Page : https://www.facebook.com/whiterichmond.business.school
This entry was posted in Training and Class on 2019-09-04 by admin.
← 2019-09-03 22:08:40 , Please admin #Accounting_Trai… 2019-09-08 18:19:57 , Please admin #Accounting_Trai… →